Iwu nzuzo - Alietc.com
Ozi Amụma dị na akwụkwọ a metụtara ozi ọ bụla ị nyere anyị, ma nke onwe ya ma azụmahịa, yana ozi anyị nakọtara na-akpaghị aka ma ọ bụ site na ndị ọzọ.
Ozi nzuzo Nzuzo niile dị na iwu ụwa, na-agbanwe agbanwe na mmezi dịka achọrọ. Site na iji saịtị anyị ma kwenye na Usoro na Ọnọdụ anyị, ị debanyere aha ma kwenye na ozi ndị a na-echekwa, ịkekọrịta na iwu nchebe dị ka arụ ọrụ n'okpuru ALIETC.com.
Ọ bụrụ na ekwenyeghi ma ọ bụ soro iwu dị na akwụkwọ a, ọ ga-eme ka ịhapụ ọrụ ozugbo, ma ọ bụ mmachi na akaụntụ gị. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla gbasara nkwupụta amụma anyị ma ọ bụ Usoro yana ọnọdụ anyị, biko kpọtụrụ onye na-ahụ maka ndị ahịa.
A ga-agwa gị ka ịnye ozi kọntaktị achọrọ iji duzie azụmahịa azụmaahịa na saịtị anyị. Registerdebanye aha n’elu ikpo okwu anyị chọrọ ikpughe aha gị, adres gị, nọmba ekwentị gị, aha ọrụ gị na ngalaba gị (ma ọ bụrụ na ọdabara).
A ga-agwa gị ka ịnye ozi njirimara yana ihe ọ bụla metụtara ụdị azụmahịa gị, dị ka aha ụlọ ọrụ, ụdị azụmahịa yana ikikere azụmaahịa.
Igosiputa na ikesa ozi
Anyị nwere ike igosipụta ndị nnabata ozi a ekpokọtara ma chekwaa ya:
Ndị otu ALIETC Group na ndị mmekọ ha na / ma ọ bụ ndị na-enye ọrụ arụmọrụ arụmọrụ na-arụkọ ọrụ ọnụ iji nyefee ngwongwo na ọrụ.
Ndị otu anyị na - azụ ahịa - iji mee ka ha zitere gị ego na ntinye
Ndị na-enye ọrụ ịkwụ ụgwọ iji hazie azụmahịa na iji dozie ma nyochaa akaụntụ.
Ndị nnọchi anya ọrụ ndị ahịa, iji mee ka ha nwee ike ịnye ọrụ yana enyemaka enyemaka dị mkpa.
Ndị na-achịkwa ihe ize ndụ iji chọpụta nchekwa nke akaụntụ ọrụ na azụmahịa.
Ndị ọrụ mmanye iwu, ndị ọrụ ndụmọdụ, ndị ọrụ gọọmentị, ndị ọrụ mkpuchi na ndị ọzọ na-achịkwa iwu iji gbasoo iwu dị mma yana igosipụta ma chebe ikike iwu anyị wee chebe ọdịmma gị na nke ndị ọzọ.
Kuki bụ ntakịrị mpempe data echekwara na draịvụ kọmputa gị site na ihe nchọgharị weebụ gị. Kuki kuzoro ALIETC.com a choro ka o wepu webusaiti nke oma site na ijide ihe ntanetị gi ma tuputa ngwongwo na oru. A na-ehichapụ kuki nnọkọ ozugbo ị mechiri ihe nchọgharị ahụ wee jiri kuki ndị na-adịgide adịgide iji nyochaa gị. ALIETC na-eji kuki na nnọchi anya kuki.
Ndobe nke Ozi
Anyị na-ejigide ozi gbasara gị na azụmahịa gị oge ọ bụrụhaala na anyị na-azụ ahịa mmekọrịta ziri ezi. A choro ka anyi mee ya iji nyefee ngwongwo na oru anyi dika ekwuru anyi na nkwuwaputa anyi.
Ọ bụrụ na i kpebie imechi azụmahịa gị na ALIETC.com ma mechie akaụntụ gị, a ga-ewepụ ozi niile gbasara onwe gị na ụlọ ọrụ. ALIETC.com ga-ehichapụ ma ọ bụ dochie ozi na-adabere na ihichapụla akaụntụ gị kpamkpam ma ọ bụ kwụsịtụrụ (n'aha ndị ahịa nke ọrụ ALIETC.com).
Ọ bụrụ na maka ihe ọ bụla, enweghị ike ihichapụ ozi nke onwe gị ma ọ bụ ụlọ ọrụ ozugbo (n'ọnọdụ ebe echekwara ozi na ebe nchekwa) a ga-ekewapụ ozi nwere ike ịbido na nhazi ọzọ ruo mgbe mbibi nke ozi ahụ zuru oke.